घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू नाइजेरियन फुटबल खेलाडीहरू एंजेलो ओग्बोना बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
एन्जेलो ओग्बोनाको हाम्रो जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, आमा बुबा, पत्नी, बच्चाहरू, जीवनशैली, व्यक्तिगत जीवन र नेट वर्थको बारेमा तथ्यहरू बताउँछ।
सरल शब्दहरूमा, हामी तपाईं डिफेन्डरको जीवन यात्रा प्रस्तुत गर्दछौं, शुरुआती दिनदेखि, जबसम्म उहाँ प्रसिद्ध भए। तपाइँको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, यहाँ वयस्क ग्यालेरीमा उनको बाल्यकाल छ - एन्जेलो ओब्बोनाको बायोको एक सारांश।
प्रारम्भिक जीवन र एन्जेलो ओगोननाको उदय।
हो, सबैलाई थाहा छ उसको उत्कृष्ट शारीरिक गुणहरू जसले उसलाई खेल पढ्न अनुमति दिन्छ। कुनै आश्चर्य छैन रोबर्टो मन्सिनीले युरो २०२१ को प्रतिस्पर्धाको तयारीको लागि उनलाई इटालीको टीममा बोलाए.
यी सबै प्रशंसकहरूको बाबजुद, केवल केही प्रशंसकहरूलाई एन्जेलो ओब्बोन्नाको जीवन कहानी थाहा छ, जुन अत्यन्तै रमाइलो छ। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
एंजेलो ओग्बोना बचपन कहानी:
जीवनी सुरुवातीहरूको लागि, उहाँ उपनाम "बोन्ने" बोक्नुहुन्छ। ओबिन्जे एन्जेलो ओग्बोना इटालीको क्यासिनो शहरमा नाइजेरियाका बुबा र आमा (नर्स) दुबैमा १ 23 1988 को मे २rd मा जन्म भएको थियो। फुटबलर तीन आमामध्ये दोस्रो हो (पाओला, एन्जेलो र एमिली) आफ्ना आमा बुबाको बीच मिलनबाट जन्मेका।
आफ्नो परिवारको एक मात्र छोराको रूपमा, एन्जेलोले केही विशेष सुविधाहरूको आनन्द उठाए - एउटा यस्तो उपलब्धि जुन नाइजेरियाका धेरैजसो आमा र बुवाहरूको लागि प्रचलन हो। के अनुमान गर्नुहुन्छ?… ओग्बोनाका एक आमाबुवा उनका पचास वर्षमा भए पनि धेरै जवान देखिन्छन्, र हामीले यसको प्रमाण यहाँ प्राप्त गर्यौं।
एन्जेलो ओग्बोन्नाका आमा बुबा - आमालाई भेट्नुहोस्।
केही कारणहरूले इटालियन खेलाडीलाई राम्रोसँग परिचित छ, उसले आफ्ना बुबालाई आफ्नो बाल्यकालको अनुभवको कथाहरूबाट हटायो। एउटा सानो बच्चाको रूपमा, प्रतिभाशाली पूर्ण-ब्याक आफ्नो आमा र बहिनीहरू, पाओला र एमिलीसँग यत्ति बढी संलग्न भए। सँगै, तिनीहरूले एक निकट बुनेको घर गठन।
बच्चाको रूपमा एन्जेलो ओग्बोना आफ्नो आमा र बहिनीहरू - पाओला र एमिलीसँग चित्रित छन्।
एन्जेलो ओग्बोना परिवार पृष्ठभूमि:
नाइजेरियाबाट इटालीमा उनीहरूको प्रवासलाई प्रायोजित गर्न सक्षम हुनुको मतलब उसको आमा र बुबा आर्थिक रूपमा स्थिर थिए। अनुसन्धानको नतीजाले पत्ता लगायो कि डिफेन्डर एक मध्यम-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमिका हो - एक जो नाइजेरियन मूलका औसत इटालियन नागरिकहरू भन्दा माथि आरामसँग बस्दछ र भाँडामा लिन्छ।
एन्जेलो ओग्बोना परिवार मूल:
दुर्भाग्यवस, उसको कालो छालाले उसलाई जातीयवादीहरूको पञ्जाबाट माफ गरेन जसले आफ्ना पुर्खाहरूको जरा दुरुपयोग गर्नमा रमाउँछन्। विदेशमा जन्मेका नाइजेरियन परिवारका मानिस जस्तै - मनपर्‍यो उज्यालो ओसाई-शमूएल, Eberechi Eze आदि, एन्जेलो नाइजेरियाको इमो राज्यको ओभरीका हुन्।
यो नक्शा एन्जेलो Ogbonna को परिवार मूल को वर्णन गर्दछ। उनका बुबाआमा नाइजाको ओभरीका हुन्।
एन्जेलो ओग्बोन्नाको पारिवारिक शहर ओवेरि नाइजेरियाको पूर्वी भागमा छ। धेरै मानिसहरूले महानगरलाई नाइजेरियाको मनोरञ्जनको राजधानीको रूपमा लिन्छन् किनभने यसको उच्च सडक क्यासिनो र विश्रामको गुणस्तर केन्द्रहरू छन्। इटालीमा जन्मेको बावजुद ओग्बोनाले इग्बो भाषा बोल्न सिकेकी छ।
एंजेलो ओग्बोना फुटबल कहानी:
इटालियन क्यासिनो छिमेकमा उसको बच्चाले अन्य बच्चाहरूसँग मिल्न प्रोत्साहित गरे पछि ह्यामर डिफेन्डरले आफ्नो फुटबल अभियान शुरू गरे। आशा भन्दा परे, खेल खेल्ने उसको पहिलो प्रयास लजालु बच्चा भए पनि, धेरै आकर्षक लाग्यो।
केही आश्वासन देखाए पछि, ओग्बोन्नाकी आमाले उनलाई नुवा क्यासिनोको युवा सेटअपमा भर्ना गराए जहाँ उनले आफ्नो भविष्यको लागि राम्रो जग बसाले। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, केटाले चाँडै नै नयाँ साथीहरूसँग प्रशिक्षण दिन थाल्दा टोली कार्यको अर्थ बुझे।
प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
उनीहरूको एक मात्र छोरा आफ्ना साथीहरू भन्दा बढी चिनिन्थे भनेर देखेर, उनको परिवारले फुटबल भनेको बोलावट हो भनेर चिनायो। दुःखको कुरा, समय बित्दै जाँदा - एन्जेलो खेलले यसको सबैभन्दा खराब देख्यो। उसको प्रारम्भिक फुटबलि years वर्ष धेरै प्राविधिक त्रुटिहरु देख्यो।
उसको जवान क्यारियरमा अवरोध जस्तो देखिने कुरालाई सुधार गर्न एन्जेलोकी आमाले सुसज्जित एकेडेमीको खोजी गरे। यो निराशाको त्यस्तो क्षण थियो - २००२ मा - टोरिनो आए र उनले तिनीहरूको परीक्षण पार गरे। १ 2002 वर्षको उमेरमा ओगबोना इटालियन क्लबसँग एक पेशेवर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
एन्जेलो ओग्बोना बायो - फेम कथाको लागि रोड:
बुल्सका लागि खेल्दै, जवानले आफ्नो कसरत कौशल र हावामा अधिकार दुवै सिध्याए। उनको कडा परिश्रमको इनाम एक समय आयो जब उनको दुर्लभ प्रतिभाको समाचार इटालीभरि फैलियो। त्यस समयमा धेरै क्लबहरू एन्जेलोको हस्ताक्षरको लागि माग्दै आएका थिए।
२०० loan-०2007 मौसममा क्रोटोनमा आफ्नो loanण चालमा राम्रो गरिसकेपछि जुभले उनीमाथि ग्रीष्मकालीन ट्रान्सफर अपमानजनक बनाए। भाग्यको रूपमा यो हुनेछ, ओग्बोनाकी आमा - जुलाई २०१ around को आसपास - उनको छोराले ओल्ड लेडीमा सामेल हुने उनको विचारलाई अनुमोदन गरे।
एन्जेलो ओग्बोना जीवनी - सफलता कहानी:
जुभमा, केन्द्र फिर्ता एक मजबूत साझेदारी संग धन्यवाद देखि ताकत मा गए Leonardo Bonucci र जियोर्जियो चीइलिनी। जे होस् क्रममा पछाडि क्रममा पछाडि ठूलो मान्छेले इटालीको प्रेमिकासँग आफ्नो दिनहरू गनिरहेको देखे। परिवारको पूर्ण समर्थनका साथ उनले २०१ West मा वेस्ट ह्याम युनाइटेडसँग £ 9.97।। Million मिलियन डलर सम्झौता गरे।
अ English्ग्रेजी प्रीमियर लिग आफ्नो खेल्ने शैलीको लागि अनुकूल मैदान भयो। को चालक बल को एक हुनु डेभिड मोयेस शस्त्रागार, ओग्बोन्ना फिफाको हप्ताको टोलीमा लगातार तेस्रो हथौड़ा बन्न पुगे - नोभेम्बर २०२० को लागि।
हामीले एउटा भिडियो तयार गरेका छौं जुन तपाईंलाई प्रशंसकहरूले किन डब गरे भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ - भित्ता। बाँकी, हामी भन्छौं, इतिहास हो।
एंजेलो Ogbonna सम्बन्ध जीवन:
त्यस भागमा हिड्दै जुन एक निश्चित अल्जेरियन भन्दा बिल्कुल भिन्न छ - Benrahma भने, ओबिन्जे (जसलाई उनका बहिनीहरूले बोलाउँथे) २०२० मा उनको प्रेमिका बने बच्चा आमा र श्रीमतीसँग सम्बन्धमा सक्रिय छ।
यस बायोलाई राख्ने समयमा, लौरा एन्जेलो ओगोननाकी पत्नी हुनु पर्छ। उनी गहिरो र पातलो भएर उहाँप्रति वफादार रहिन्। प्रशंसकहरु द्वारा भने अनुसार, जोडी को आउटिंग को अनौंठो तरीका - जापानी पोशाक को ड्रेसिंग - कुनै पछाडि छैन।
यद्यपि प्रेमीहरु - अहिले सम्म विवाहित छैन - आफ्नो परिवारको पूर्ण समर्थन पाइसकेका छन्। जस्तो म लेख्छु, फुटबलर र उनको प्रेमिकाको शमूएल ओग्बोना नामको एक जना छोरा छ।
२०२० COVID-१ lock लकडाउनको क्रममा दुबै प्रेमीहरूले आफ्नो दोस्रो बच्चाको जन्मको आशा गरिरहेका छन्। आफ्नो आमा (एक नर्स), बहिनीहरू र प्रियजनहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, Ogbonna आवश्यक गरे। बेलाइतले COVID को प्रभावलाई कसरी कम महत्त्व दिए भनेर गुनासो गर्दा उहाँ एक पटक मुखर भए। कुनै प्रश्न बिना, इटालियन जन्म नाइजेरियन एक आदर्श परिवार मानिस हो।
एंजेलो ओग्बोना व्यक्तिगत जीवन:
हो, ऊ पिचमा द्रुत-विवेकी र आक्रामक देखिन्छ। जे होस्, उसको व्यक्तित्वमा आँखाले पूरा गर्ने भन्दा बढी कुरा छ। सबैभन्दा पहिला र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, ओग्बोनाको व्यक्तित्व मिथुन राशि चक्र गुणको मिश्रण हो।
अर्को नोटमा, एन्जेलोसँग केवल एक क्षण मात्र बिताउँदा तपाईं उनको स्नेही र दयालु व्यक्तित्व महसुस गर्नुहुन्छ। मनपर्‍यो पाब्लो फर्नल्स, वेस्ट ह्याम पावरहाउस प्रायः शान्त ठाउँहरूमा आफूलाई भर्ती गर्दछ। यहाँ जस्तो, हामी उनलाई लन्डनमा आफ्नो घर बाहिर सुन्दर दृश्यमा आराम गरिरहेको देख्दछौं।
एंजेलो ओग्बोना जीवनशैली:
वर्ष २०२० ले ओबिनजे भन्दा थोरै कमाई गरेको देखियो टमास सौसेक र भन्दा कम जाररोड बोवेन। उसले लगभग £ 3.64 मिलियन को वार्षिक तलब बनाउँछ। यद्यपि यो धेरै पैसा भएको छ, ओग्बोनाले आफूलाई एक विदेशी जीवन शैली बाँचिरहेको देख्दैनन्। जस्तै ती फ्ल्याश कारहरू, ठूला घरहरू, केटीहरू, बोज इत्यादिद्वारा सजिलैसँग सजिलैसँग देख्न सकिन्छ।
अरू के छ? ... उसको आयले उनको नेट वर्थलाई अनुमानित १£ मिलियन डलर (२०२० तथ्या )्क) सम्म बढायो। उसको जेबमा धेरै फुटबल पैसा भएता पनि, प्रशंसकहरूले उनको ओग्बोनाको ड्रेसिंग बानीलाई प्रश्न गरेका छन्। आफ्नै लागि हेर्नुहोस्।
एंजेलो ओग्बोना पारिवारिक जीवन:
वेस्ट ह्याम मिडियासँग कुरा गर्दै उनले विश्वलाई आफ्नो अस्तित्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्न लगाए। Ogbonna भने; परिवार र फुटबल मात्र दुई चीजहरू छन् जसले उसलाई राहत दिन्छ। अब हामी तपाइँलाई उसको घरका सदस्यको बारेमा उसको सुन्दर बहिनीहरू - पाओला र एमिलीबाट शुरू गर्ने तथ्यहरू प्रस्तुत गर्नेछौं।
एंजेलो ओग्बोनाका भाई बहिनीहरूको बारेमा:
फुटबलरका बहिनीहरू, पाओला र एमिलीले आफ्नो बाल्यावस्थाको अनुभवको मजा लिन ठूलो भूमिका खेले। हाल एन्जेलो ओब्बोन्नाका दाजुभाइहरू इटालीमा बस्छन् तर उनीहरूको भाइलाई पूर्वी स्ट्रिटफोर्ड, पूर्वी लन्डनमा उनको घरमा भेट्न आउँदछन्।
एंजेलो ओग्बोनाकी आमाको बारेमा:
हामी सबैलाई थाहा छ कि हरेक अभिभावकको खुशी उनीहरूको बच्चाले खुशी र स्वस्थ जीवन बिताएको देख्दछन्। यो ओग्बोन्नाकी आमाको मामला हो, जसको पोशाकले उनको पेशाको बारेमा धेरै बोल्दछ - नर्स।
अनुसन्धानले देखाउँदछ कि तीन आमा एक्लो हातले उनको एन्जेलो, पाओला र एमिलीको हुर्काइन्। यो उनीहरूको बुबा बिना भएको थियो। एक नर्सको रूपमा, उनले एन्जेलोले फुटबलको माध्यमबाट महानता हासिल गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित नगरी सुनिश्चित गरिन्।
एंजेलो ओग्बोनाका पिताको बारेमा:
स्टारडममा उनको वृद्धि भए पनि, केन्द्र-पछाडि उसको बुवाको बारेमा केही भनेको छैन। आफ्ना आमाबाबु मध्ये, Ogbonna रमाईलो आफ्नो जीवन मा उनको क्यारियर सफलता को श्रेय। हुनसक्छ उसको बुबाले अचानक सम्पूर्ण परिवारबाट विश्राम लिएको थियो। फेरि, सायद सबैभन्दा नराम्रो - उसले मृत्युको कठोर हातले आफ्नो जीवन गुमाएको हुन सक्छ।
एन्जेलो ओग्बोनाका काजिनको बारेमा:
केन्द्र-पछाडिको सबैभन्दा प्रख्यात नातेदारहरू मध्ये एक उनीको भान्जा भाइ प्रिन्स एलाजार ओन्नीवाची ओग्बोना हुन्। दुबैले समान सरनेम साझा गर्दछन्, पितृ सम्बन्धलाई प्रकट गर्दछ कि एक उपलब्धि।
राजकुमार एलाजार ओनिवुची ओग्बोन्ना एक अनुभवी फुटबल टेक्नोक्रेट हुन् जसले खेलकुदका लागि आँखा पनि पाएका छन्। उसको बाहेक, त्यहाँ ओग्बोन्नाको बाँकी विस्तारित परिवारको बारेमा कुनै जानकारी छैन। साथै, उसको हजुरबा हजुरआमा, काका र काकी
एन्जेलो ओगबोना अनटोल्ड तथ्यहरू:
लाइब स्टोरी अफ ओबिन्जलाई भेट्न, यहाँ केहि सत्यताहरू छन् जुन तपाईलाई उनको संस्मरण बुझ्न मद्दत गर्दछ।
तथ्य # १: नजीक मृत्यु अनुभव:
एन्जेलो ओग्बोनाले एक क्षणको अनुभव गरे जुन उनलाई अझै घाँटीमा एकेठाउ दिन्छ। २०० 2008 मा, अझै टोरिनोको लागि प्रस्तुत गर्ने क्रममा, "फुटबल भित्" दु: खको रूपमा तनावको रातको खेल पछि चक्रमा निदायो।
ऊ ब्यूँझने बित्तिकै उसको कार सडकको अर्को पट्टि पुगेको थियो र ट्युरिनको खोलामा डुबेको थियो। धन्यबाद, ओग्बोना दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाबाट बचे।
"म तपाइँसँग कुराकानी गर्न यहाँ छु। त्यो रात, म एयरपोर्टमा ड्राइभ गर्दै थिएँ, र म पनि सोच्छु। "
"जब म माथि गएको थिएँ, मेरो कार रोडको विपक्षमा रहेको थियो। आईटीले छिटो भयो। म फेन्सीलाई हेट गर्थें र रिभरमा तल गयो। ”
प्रति वर्ष £ 3,640,000
प्रति महिना £ 303,333
प्रति हप्ता £ 69,892
प्रति दिन £ 9,985
प्रति घण्टा £ 416
प्रति मिनेट £ 6.9
प्रति सेकेन्ड £ 0.12
ब्रेकडाउनबाट, औसत इटालियन नागरिकले कम्तिमा साढे तीन वर्ष काम गर्नुपर्नेछ जुन ओग्बोनाले एक महिनामा प्राप्त गर्दछन्। अर्कोतर्फ, औसत नाइजेरियालीहरूले १० 105 बर्ष सम्म काम गर्नु आवश्यक छ उनीहरूले एक महिनामा पूर्ण ब्याकले कमाएको भन्दा बढी कमाउन सक्दछन्।
हामीले घडीमा टिकको रूपमा उसले के बनाउँछ त्यसको विश्लेषण हामीले रणनीतिक रूपमा राख्यौं। तपाईं यहाँ आउनु भएकोले आफूलाई कत्ति धेरै आयो भनेर खोज्नुहोस्।
तपाईं एन्जेलो Ogbonna हेर्न शुरू गर्नुभयोबायो, यो उसले कमाएको हो।
तथ्य # १: डेक्लान राइसकी आमालाई उनको अनमोल उपहार:
सामना गर्दै मार्सेलो बिएल्साको २०२०-२१ EPL सीजनमा काउन्टर-अट्याकिंग पक्ष अधिकांश टीमको लागि गाह्रो छ। यद्यपि ओग्बन्नाले कप्तानको नेतृत्वमा हेडरको साथ विजयी गोल गरेपछि लीड्सको साथ ह्यामरलाई जित दिए। डेक्लान चावल.
यो सबै डेक्लानकी आमाको जन्मदिनमा भयो, जसले २०२० मा 54 2020 बर्षको भइसक्यो। त्यसैले, डेक्लानले ओग्बन्नालाई उत्कृष्ट खेलाडीको रूपमा प्रशंसा गरे जब उनको आमालाई जन्मदिनको बधाई छ!.
तथ्य # १: धर्म:
नाम (एन्जेलो) पहिले नै आफ्नो धार्मिक स्थिति छोडेको छ। ऊ चर्चको केटा हुन सक्दैन, यद्यपि उसले विश्रामदिनलाई पवित्र राख्छ र उसको इसाई आस्थाका आज्ञाहरूलाई पालन गर्दछ।
तथ्य # १: गरीब फिफा रेटिंग:
एक पटक एक समय, Ogbonna राम्रो रेटिंग्स देखे। यो अब ड्रप भएको छ किनकि उसले आफ्नो शिखर पार गरेको छ। उनको भर्खरको २०२० प्रदर्शनको कारण हामी भन्न सक्छौं कि फिफाले उनलाई अवमूल्यन गरे - जस्तो उनीहरूले गरे आर्थर मासुआकू.
पढ्ने क्रममा, हामी बुझ्छौं कि एन्जेलो ओगबोन्नाको जीवनीले निम्न कुराहरू सिकाएको छ; एक फुटबलर को लागी, धैर्यता कुर्ने क्षमता छैन, तर प्रतीक्षा गर्दा सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नु को कार्य हो। जुभेन्टसमा गिर्दो क्रमलाई तल झार्नु कडा थियो, तर वेस्ट ह्यामको जीवन ओग्बोनाको लागि मीठो छ।
साथै, हामी उसको क्यारियरभरि उसको हेरचाह सुम्पिदिनु भएकोमा हामी उसको अभिभावक (विशेष गरी उसकी आमा) सराहना गर्छौं। उनीसँग उनका सम्पूर्ण परिवार उथलपुथलको क्षणमा उहाँसँगै उभिएका थिए - जस्तै उनको २०० accident को दुर्घटना। हामीलाई उनको बहिनीहरू (पाओला र एमिली) को उल्लेख गर्न सुन्दर छ, जसले आफ्नो बचपन लाई जीवन्तताका साथ उज्यालो बनाए।
हाम्रो जारी खोजमा हामीसँगै बस्नु भएकोमा धन्यवाद अफ्रिकी फुटबल कथाहरू। कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाइँ केहि लेख फेला पार्नुभयो जुन हाम्रो लेखमा सही देखिदैन।
अन्यथा, नाइजेरियन मूलको इटालियन फुटबलरको बारेमा तपाई के सोच्नुहुन्छ त्यसमा हामीसँग एउटा टिप्पणी साझा गर्नुहोस्। अन्तमा, हाम्रो विकी-तालिकामा एन्जेलो ओगबोन्नाको बायोको सारांश समावेश छ।
पुरा नाम: ओबिन्जे एन्जेलो ओग्बोना
उमेर: २ years बर्ष र months महिना पुरानो।
जन्मस्थान: क्यासिनो, इटाली
प्रेमिका / पत्नी: लौरा
बच्चाहरु: शमूएल (छोरा)
नेट मूल्य: £ .40.2०.२ मिलियन (२०२० तथ्या )्क)
वार्षिक वेतन: Million २ मिलियन (२०२० तथ्या )्क)
पारिवारिक मूल: नाइजेरिया
उचाइ: 1.91 मीटर (6 फुट3मा)
जुइ फुटबल डायरी
पश्चिम हाम फुटबल डायरी
पाब्लो फोर्नाल्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू